ဗဟုသုတ – Page3– Focus Myanmar
သင်မသိသေးတဲ့ ရှာလကာရည်ကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနည်း (၁၀) နည်း
ရှာလကာရည်ကို ဟင်းချက်ရာမှာတင်မကပဲ အလှအပရေးရာ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ရှာလကာရည်ကို အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေဖို့ အသုံးပြုနည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပန်းပင်များ ဖူးပွင့်စေတဲ့ သဘာဝအားဆေးပြုလုပ်နည်း
ပါဝင်ပစ္စည်း(1) ကွကျဥ – 1 လုံး၊ ရေတဈလီတာ – 1 ဗူး ဗိုက်တာမင် ဘီဝမ်းဆေးခဲ –5လုံး၊ ဟင်းခတ် အချိုမှုန့်လ်ဘက်စားဇွန်း – 1 ဇွန်းစာရောစပ်ထည့်ပါ။
ဘေစင်ပိုက်၊ ရေချိုးခန်းပိုက်တွေ ပိတ်သွားပြီး ရေမစီးပဲအိုင်နေတာမျိုးက အရမ်းစိတ်ညစ်စရာကောင်းသလို၊ စိတ်အနှောက်အယှက်လည်း အရမ်းဖြစ်ရပါတယ်နော်။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ဆိုသည်မှာ ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော ဒေသများတွင်ပင် စိုက်ပျိုး ဖြစ်ထွန်းပြီး အလွန် အကြမ်းခံသော အပင်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပင်၏ ဆေးဖက်ဝင်သော အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့် သဘာဝနတ်ဆေးပင် အဖြစ်လူသိများသည်။
မိဘခြေရာ ခံယူပွဲဆိုတာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ယနေ့ခေတ် လူတွေ လုံးဝကို မသိကြလို့ပါ။ တကယ်တော့ မိဘခြေရာ ခံယူပွဲဆိုတာ မြန်မာတို့ရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်တာမို့ မြန်မာမိသားစုတိုင်း ခံယူကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးရှင် မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ ကုံလုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ မိဘခြေရာ တောင်းယူ ပူဇော်နည်းလေးကို အောက်မှာ
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် လက်သန့််ဆေးရည် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နည်း ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လုပ်နည်းလေး မျှဝေပေးပါ့မယ် ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည် အသုံးဝင်ပုံကိုမိတ်ဆွေတွေ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။သိပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါ။ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည် ပြုလုပ်ဖို့ကုန်ကြမ်းတွေက ၁. လက်သန့်ဂျယ် ၁ကီလို( hend jell လို့ ကုန်ကြမ်းဆိုင်မှာ ပြောဝယ်လို့ရပါတယ်.. တစ်ကီလို ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ပါ.. အဲဒီထက်မပိုပါနော်.) ၂. သန့်စင်ပြီး အရက်ပြန် – ၁လီတာ(အရက်ပြန်က နှစ်သက်ရာ ဆေးဆိုင်.ကုန်ကြမ်းဆိုင်.ပရဆေးဆိုင် တွေမှာ.ဝယ်လို့ရပါတယ်.. အမျိုးစားတွေ တံဆိပ်နဲ့ နိုင်ငံတွေကွာပြီး ဈေး မတူကြဘူးနော်) ၃. Tri EthanoL Amine 99% ၁၂၀ မီလီ (ဓာတုဆိုင်တွေမှာ TEA လို့ပြောဝယ်ရပါတယ်။ လက်ဖက်ရည် မဟုတ်ပါဘူး။ ရေမလိုလက်သန့် တစ်ဖုံဝယ်ရင် အဲဒါ ဘာလဲဆိုတာ ဆိုင်တွေက မပြောပြပါဘူး။ အချို့ ဝယ်လုပ်သူတွေကလည်း ဘာမှန်းမသိပဲ လုပ်ရတာပါပဲ. မှတ်ထားလို့ရအောင်လို့ပါ။...